Ch 1 John – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Yooxanaa / Ch 1 John
1:1 Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, oo Ilaah jiray Ereyga.
1:2 Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii.
1:3 Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo aan waxba la sameeyey waxaa laga sameeyey isaga oo aan.
1:4 Life ahaa isaga, iyo Life ahayd nuurka dadka.
1:5 Oo weliba iftiinka iftiimay gudcurka, iyo gudcur buu aynan.
1:6 Waxaa jiri jiray nin Ilaah laga soo diray, magiciisa la odhan jiray John.
1:7 Waxa uu yimid marag ah in ay bixiyaan maragga hareerihiisa Light ah, si dhammaan way rumaysan lahaa xaggiisa.
1:8 Isagu nuurka ma uu ku, laakiin waxa uu ahaa in ay bixiyaan maragga hareerihiisa Light ah.
1:9 Light runta ah, oo nin kasta oo iftiiminaya, imanayo dunidan.
1:10 Wuxuu ku jiray dunida, dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo ay dunida oo ma ay garan isagii.
1:11 Waxa uu u baxay inuu isaga u gaar ah, iyo kuwiisiina ma ay aqbalin isaga.
1:12 Laakiinse ku alla kii sameeyey ay aqbalin isaga, kuwa magiciisa rumaystay, oo wuxuu siiyey amar ah in ay noqdaan wiilashii Ilaah.
1:13 Kuwan waxaa ku dhashay, aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama doonistii Aadanaha, laakiin Ilaah.
1:14 Oo Ereyguna jidh buu noqday, oo isna wuxuu ina dhex joogay,, oo waxaannu aragnay ammaantiisii, ammaanta sida in ka mid ah wiil keliya oo dhashay xagga Aabbaha ka soo, buuxa ee nimco iyo run.
1:15 John bixisaa maragga isaga ku saabsan, oo isna wuxuu u ooyaa, oo wuxuu ku yidhi: "Tani waa mid ka mid ah oo ku saabsan kii aan idhi: Isagu waa kan inuu iga daba yimaado, lagu meeleeyo ka hor i of, waayo, hortay buu jiray. ' "
1:16 Oo buuxnaantiisa, waxaan oo dhan heshay, xataa nimco ka nimco.
1:17 Waayo, sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse, inkastoo, laakiinse nimcada iyo runtu waxay ku yimaadeen Ciise Masiix.
1:18 Cidna abid ma arkay Ilaah; Wiilka keliya oo dhashay, kan laabta Aabbaha, inuu isaga qudhiisu ayaa ku tilmaamay.
1:19 Kanu waa maraggii Yooxanaa, markii Yuhuuddu Yeruusaalem uga soo diray wadaaddada iyo reer Laawi, si ay u weydiiso inuu isaga, "Yaad tahay?"
1:20 Oo isna wuxuu u qirtay, mana uu inkirin; iyo wixii uu qirtay ahaa: "Anigu ma ihi Masiixa."
1:21 Oo waxay weyddiiyeen: "Markaas waxa aad tahay? Ma Eliyaas baad tahay?"Oo isna wuxuu yidhi, "Anigu ma ihi." "Ma waxaad tahay Nabiga?"Oo isna wuxuu ugu jawaabay, "Maya"
1:22 Sidaa darteed, Waxay ku yidhaahdeen: "Yaad tahay, si aan laga yaabaa in jawaab kuwii na soo diray siin? Maxaad dhihi kartaa adiga kugu saabsan?"
1:23 Waxa uu sheegay in, "Waxaan ahay codka ah iyagoo qaylinaya oo lamadegaanka ku yaal, 'Toosiya jidka Rabbiga,'Sidii nebi Isayos u yidhi. "
1:24 Oo qaar ka mid ah kuwa la soo diray waxay ka yimaadeen Farrisiinta ka mid ah.
1:25 Oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen, "Markaas maxaad dadka u baabtiistaa, haddii aadan ahayn Masiixa?, oo aan Eliiyaah, oo aan Nabiga?"
1:26 Yooxanaa wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi by: "Waxaan ku baabtiisaa biyo. Laakiin dhexdiinna waxaa jooga mid, kuwaasoo aadan aqoon.
1:27 Isla sidaas waxa kan waa inuu iga daba yimaado, kuwaas oo lagu meeleeyo ka hor i of, ka suuman ah oo kabo aanan istaahilin inaan yeelmihii ma ihi. "
1:28 Waxyaalahaas ka dhacay Bethania, Webi Urdun shishadiisa, halkaas oo Yooxanaa la baabtiisayay.
1:29 Maalintii labaad, Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo xaggiisa u soo socda, oo sidaas daraaddeed ayuu yiri: "Bal eeg, Wanka Ilaah. Bal eeg, kii qaada dembiga dunida.
1:30 Tani waa mid ka mid ah oo ku saabsan kii aan idhi, Waxaa iga daba nin gaaray, kuwaas oo lagu meeleeyo ka hor i of, waayo, hortay buu jiray. '
1:31 Oo anna ma aan aqoonin isaga. Haddana waa sababtaa tan aan u imid anigoo dadka biyo ku baabtiisa: oo sidaas daraaddeed ayuu la sameeyey muuqdaan in Israa'iil. "
1:32 Markaasaa Yooxanaa wuxuu u bixiyey maragga, oo wuxuu ku yidhi: "Waayo, waxaan arkay Ruuxa oo samada uga soo degaya sidii qoolley oo kale; oo isna wuxuu ku dul hadhay isaga.
1:33 Oo anna ma aan aqoonin isaga. Laakiin kii ii soo diray inaan dadka biyo ku baabtiiso igu yidhi: "Waxa uu ka badan kan aad ku aragtid Ruuxa oo ku soo degaya oo ku haray isaga waxaa kor saaran, tani waa mid ka mid ah oo la baabtiisa Ruuxa Quduuska ah. '
1:34 Oo haddana waxaan arkay, oo waxaan siiyey maragga: in this mid yahay Wiilka Ilaah. "
1:35 Maalintii xigtay ayaa mar kale, Yooxanaa wuxuu guntanaa laba xertiisii ​​ah oo taagan.
1:36 Oo muuqashada qaadaan Ciise oo socda, ayuu yiri, "Bal eeg, Wanka Ilaah. "
1:37 Oo laba xertiisii ​​way dhegaysanayeen isaga u hadlaya. Oo iyana waxay raaceen Ciise.
1:38 Markaasaa Ciise, jeestay oo arkay iyagii isaga soo socda, wuxuu iyagii ku yidhi, "Maxay yihiin hadalladan aad doonaya?"Oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen, "Rabbi (taas oo macnaheedu yahay in turjumaad, Macallimow), halkeed ku nooshahay?"
1:39 Wuxuu iyaga ku yidhi, "Kaalay oo arag." Waxay tageen oo arkeen meeshuu degganaa, oo waxay maalintaas ayaan la joogay isagii. Haddaba waxay ahayd abbaaraha saacaddii tobnaad.
1:40 Oo Andrew, oo ahaa Yacquub walaalkiis Simoon Butros, waxay ahayd mid ka mid ah labadii maqlay isaga ku saabsan ka soo John iyo soo raacay.
1:41 First, wuxuu ka helay walaalkiis Simoon, oo wuxuu ku yidhi isagii, "Waxaan helnay Masiixa," (kaas oo la tarjumay Masiix).
1:42 Oo isna wuxuu isagii keentay in Ciise. Markaasaa Ciise, fiirinaya at, sheegay: "Adigu waxaad tahay Simoon, ina Jonah. Waxaa lagu odhan doonaa Keeyfas," (kaas oo la tarjumay sida Peter).
1:43 Maalintii labaad, inuu doonayo inuu Galili tago, oo wuxuu helay Filibos. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi isagii, "I raaca."
1:44 Filibos wuxuu ahaa reer Beytsayda, ah magaaladii Andaros iyo Butros.
1:45 Filibos wuxuu doonay Nataana'el, oo wuxuu ku yidhi isagii, "Mid ka mid ah oo ku saabsan kii Muuse wuxuu qoray in sharcigii iyo nebiyadii ku Waannu helnay: Ciise, kan ahaa ina Yuusuf, oo ka yimid Naasared. "
1:46 Markaasaa Nataana'el wuxuu ku yidhi, "Wax wanaagsan u noqon kara Naasaret?"Filibos wuxuu ku yidhi, "Kaalay oo arag."
1:47 Ciise wuxuu arkay Nataana'el oo xaggiisa u soo socda, oo wuxuu ku yidhi ku saabsan, "Bal eeg, mid reer binu Israa'iil ah oo aan si dhab ah aanay khiyaano ku jirin. "
1:48 Nataana'el wuxuu ku yidhi isagii, "Laga soo bilaabo xaggee baad i taqaan?"Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, "Intaan Filibos kuu yeedhin, marka aad ahaayeen geedkii berdaha hoostiisa joogtay, Ayaan ku arkay. "
1:49 Kolkaasaa Nataana'el u jawaabay oo wuxuu ku yidhi: "Rabbi, waxaad tahay Wiilka Ilaah. Oo waxaad tahay boqorkii reer binu Israa'iil. "
1:50 Ciise baa u jawaabay oo ku yidhi: "Maxaa yeelay, waxaan idiin sheegay inaan aad geedkii berdaha hoostiisa joogtay arkay, aad aaminsan tahay. Wax kuwan ka weyn, waxaad arki doontaa. "
1:51 Oo isna wuxuu ku yidhi isagii, "Aamiin, Aamiin, Waxaan idinku leeyahay,, waxaad arki doontaan samadoo furan, iyo malaa'igaha Ilaah oo kor u kacaya oo ku soo degaya Wiilka Aadanaha ayaa ka badan. "